ဂျီမေးလ်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ရန်သိကောင်းစရာများ | Gadget သတင်း
Ignacio Sala | | ကွန်ပြူတာများ, လဲ tutorial
ဂူဂဲလ်၏အီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်သောဂျီမေးလ်သည် ၂၀၀၄ ခုနှစ်၊ Aprilပြီ ၁ ရက်တွင်ဈေးကွက်သို့စတင်ခဲ့သည်။ သို့သော် ၂၀၀၉ ခုနှစ်ဇူလိုင်လ ၇ ရက်အထိ beta မှထွက်ခွာသွားသည့်အချိန်တွင်အသုံးပြုသူများအားလုံးသည်အီးမေးလ်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်နိုင်ခဲ့သည်။ ၃ နှစ်ကြာပြီးနောက်၎င်းသည် Microsoft (Outlook, Hotmail, Msn ... ) ကိုမထုတ်နိုင်တော့ပါ ကမ္ဘာပေါ်တွင်အများဆုံးအသုံးပြုသောပလက်ဖောင်း။
ယခုလက်ရှိအသုံးပြုသူအရေအတွက်ကိုမသိရှိရသေးပါ။ သို့သော် Android နှင့်စမတ်ဖုန်းတစ်ခုကိုအသုံးပြုရန်စဉ်းစားပါက၊ ဂူဂဲလ်အကောင့်တစ်ခုဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်၊ ဂူဂဲလ်အကောင့်တစ်ခုဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်ဆိုပါကဂျီမေးလ်၏အတွေးအခေါ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရနိုင်သည်။ ဖြစ်လာသည် ခွင့်ပြုခဲ့သောအကြောင်းပြချက်တစ်ခုမှာ စျေးကွက်ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်အဖြစ်နေပါကျွန်ုပ်တို့က၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသောစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနှင့်လုပ်ဆောင်မှုအမြောက်အများတွင်တွေ့ရသည်။
အခြားအကြောင်းပြချက်တစ်ခုမှာ၎င်းကိုကမ္ဘာတဝှမ်းတွင်အများဆုံးအသုံးပြုသောဂူဂဲလ် ၀ န်ဆောင်မှုများဖြစ်သောဂူးဂဲလ်ဒရိုက်၊ အလုပ်များ၊ ဂူဂဲလ်စာရွက်စာတမ်းများ၊ Hangouts ... နှင့်ပေါင်းစည်းခြင်း၌ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိရသည်။ မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များအတွက် application မှတစ်ဆင့်ဂျီမေးလ်မှကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသောရွေးချယ်စရာအရေအတွက်သည်အလွန်များသော်လည်း ကျနော်တို့ကထဲကအများဆုံးရနိုင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်မှာ က desktop ဗားရှင်း၌တည်ရှိ၏။
တိုက်ဆိုင်စွာဖြင့် Google Chrome ဘရောက်ဇာနှင့်အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်သောဒီ Desktop version (အရာအားလုံးသည်အိမ်တွင်ရှိနေသည်) သည်ရွေးချယ်စရာအမြောက်အမြားကိုရရှိနိုင်သည်။ လက်ကိုင်ဖုန်းအက်ပ်များတွင်မရနိုင်သောရွေးချယ်မှုများသို့သော်၎င်းသည်ထိုကိရိယာများအတွက်အသုံးချပရိုဂရမ်၏လည်ပတ်မှု၊ ဥပမာအီးမေးလ်ပို့ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောအီးမေးလ်များကိုသီးခြားနောက်ခံအကြောင်းအရာများ အသုံးပြု၍ ခွဲခြားရန်တံဆိပ်များဖန်တီးခြင်းစသည့်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။
သင်သိလိုလျှင် အကောင်းဆုံး Gmail လှည့်ကွက် အကျိုးအပြည့်အဝရရှိရန်သင့်အားဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
5 subscriptions ကိုပယ်ဖျက်ပါ
8 forwarding အီးမေးလ်များ
9 Gmail နေရာလွတ်ပေးပါ
13 Gmail ကို offline သုံးပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ဂျီမေးလ်အကောင့်၏နောက်ခံပုံကိုပြောင်းခြင်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းသောလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့မိခင်ဘာသာစကားနှင့်ကွဲပြားစွာထိတွေ့စေရန်ခွင့်ပြုသည်။ သင်ကမ်းလှမ်းသောပုံအချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနိုင်သည်သာမကကျွန်ုပ်တို့လည်းအသုံးပြုနိုင်သည် ငါတို့သိမ်းထားတဲ့အခြားပုံရိပ် ငါတို့အသင်းထဲမှာ။
နောက်ခံပုံပြောင်းရန်ဂျီမေးလ်၏ညာဘက်အပေါ်ဘက်ရှိဂီယာဘီးကို နှိပ်၍ Themes option ကိုနှိပ်ပါ။ နောက်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင့်နောက်ခံအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနိုင်သောပုံအားလုံးကိုပြလိမ့်မည်။ အောက်တွင်၊ ၎င်းကိုသုံးရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာမှရုပ်ပုံတစ်ခုတင်ရန်ရွေးစရာကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိသည်။ အကယ်၍ ဤအရာသည်သင်၏ကိစ္စဖြစ်ပါကဓာတ်ပုံ၏ resolution သည်သင်၏မော်နီတာကဲ့သို့တူညီရမည်ကိုသတိရသင့်သည် ကျနော်တို့က pixels ကို cuffs အဖြစ်မမြင်ရအောင်တားဆီးလိမ့်မယ်။
အီးမေးလ်ကိုအချိန်ဇယားဆွဲခြင်း၏မူလပေါင်းစည်းမှုမတိုင်မှီကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအရာသည်အံ့ဖွယ်ကောင်းသောလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည့် extension မှတစ်ဆင့်ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ သို့သော်သင်သည်ထိုတစ်ခု option ကိုထားရှိရာ ကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်တစ်စောင်ပေးပို့ဖို့စီစဉ်ထားခွင့်ပြုပါတယ် ကျန်တဲ့အရာအားလုံးကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ။
အီးမေးလ်တစ်စောင်ပေးပို့ရန်စီစဉ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်အီးမေးလ်ကိုသာရေးရန်၊ လက်ခံသူ (မ်ား) ကိုထည့်။ အပေါ်ကိုနှိပ်ပါ ခလုတ်ဘေးတွင်ဖော်ပြထားသောမြှား ကျွန်ုပ်တို့အီးမေးလ်ကိုပေးပို့လိုသည့်နေ့နှင့်အချိန်ကိုရွေးချယ်ရန်ပေးပို့ပါ။
တံဆိပ်များကို အသုံးပြု၍ အီးမေးလ်များကိုဖွဲ့စည်းခြင်းသည်ကွန်ပျူတာများမှဖိုင်များကိုစုစည်းရန်လမ်းညွှန်များဖန်တီးရာတွင်အနီးကပ်ဆုံးဖြစ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်ရန် folder တစ်ခုအတွင်းရှိလူတစ် ဦး နှင့်သက်ဆိုင်သော email အားလုံးကိုအုပ်စုဖွဲ့နိုင်သည်။ ဒီတံဆိပ်များ၊ မျက်နှာပြင်၏ဘယ်ဘက်ခြမ်းတွင်ပြသလျက်ရှိသည်, လက်ခံရရှိ, Featured, ရွှေ့ဆိုင်း, အရေးကြီးသောအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော ...
ကျွန်ုပ်တို့သည်တံဆိပ်များကိုဖန်တီးပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောအီးမေးလ်များအားလုံးကိုကိုယ်တိုင်ခွဲခြားရန်မလိုချင်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်စစ်ထုတ်ခြင်းများကိုပြုလုပ်ရမည်။ ဤစစ်ထုတ်ခြင်းများ၏ကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောအီးမေးလ်များအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့သတ်မှတ်ထားသည့်စံနှုန်းနှင့်ကိုက်ညီသည်။ သူတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့သတ်မှတ်ထားသောတံဆိပ်ကိုအလိုအလျောက်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်.
ပူးတွဲဖိုင်များပါ ၀ င်သည်
ကျွန်ုပ်တို့ filter ကိုတည်ထောင်ပြီးသည်နှင့်၎င်းစံများပါ ၀ င်သောအီးမေးလ်များအားလုံးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်ချင်သည်ကိုသတ်မှတ်ရပေမည်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Gadget News tag ကိုထည့်လိုသည်။ ယခု မှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့ရရှိခဲ့သောအီးမေးလ်များနှင့်ယခုမှ စ၍ ကျွန်ုပ်တို့လက်ခံရရှိခဲ့သောအီးမေးလ်များ၊ News Gadget tag ကိုအလိုအလျောက်ထည့်ပေးလိမ့်မည်။
ပူပြင်းတဲ့အီးမေးလ်တစ်စောင်ရေးခြင်းသည်ဘယ်တော့မှမလွယ်ကူပါ။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးပို့ရန်ပေးပြီးစက္ကန့်ပိုင်းအကြာတွင်ပြန်လည်စဉ်းစားပါ။ ကံကောင်းထောက်မစွာဖြင့်၊ ဂျီမေးလ်သည်အီးမေးလ်တစ်စောင်ပို့ပြီးပါကစက္ကန့် ၃၀ အထိဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။ ထိုကာလလွန်ပြီးမှ၊ ဆုတောင်းခြင်းမှတပါးအဘယ်အမှုကိုမျှမပြုနိုင်၊
အီးမေးလ်တစ်စောင်ပေးပို့ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပယ်ဖျက်နိုင်သည့်အများဆုံးအချိန်ကိုသတ်မှတ်ရန်ညာဘက်အပေါ်ထောင့်ရှိဂီယာကို နှိပ်၍ ဝင်ရောက်ချိန်ညှိချက်များကိုနှိပ်ပါ။ အထွေထွေ tab တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်တင်ပို့ခြင်းကိုပယ်ဖျက်ပါ။ တင်ပို့ခြင်းဖျက်သိမ်းမှုကာလနှင့်5မှ 30 စက္ကန့်အထိအချိန်ကိုသတ်မှတ်။
ဥပဒေအရသော်လည်းကောင်းသတင်းများပေးပို့ခြင်းကဲ့သို့သောအကြီးအကျယ်ပေးပို့သောမက်ဆေ့ခ်ျအားလုံးတွင်စာရင်းပေးသွင်းခြင်းကိုပယ်ဖျက်ရန်ပါ ၀ င်သည်။ သို့သော်၎င်းတို့အားလုံးကထိုရွေးချယ်မှုကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမပြပါ။ ကျွန်ုပ်တို့မလိုအပ်သော ၀ န်ဆောင်မှုများမှအီးမေးလ်များလက်ခံရရှိခြင်းကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ဂျီမေးလ်ကခွင့်ပြုသည် စာရင်းပေးသွင်းရန် အခြားနည်းလမ်းများမှတဆင့်တောင်းဆိုရန်မလိုဘဲတိုက်ရိုက်။
သင်အားလပ်ရက်သို့သွားရန်သို့မဟုတ်ရက်အနည်းငယ်နားရန်စီစဉ်သောအခါဂျီမေးလ်မှကမ်းလှမ်းသောအဖြေပေးစက်ကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုရန်အထူးအကြံပြုလိုသည်။ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့ယခင်ကတည်ဆောက်ခဲ့သည့်စာသားများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောမက်ဆေ့ခ်ျများအားလုံးကိုတုန့်ပြန်ရန်၊ ဂျီမေးလ်အတွက်ဘာသာရပ်နှင့်အချိန်ကာလကိုထည့်သွင်းရန်တာ ၀ န်ရှိသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အီးမေးလ်များကိုဖြေဆိုရန်တာဝန်ရှိလိမ့်မည်.
ကျွန်ုပ်တို့ထံအလိုအလျောက်ပြန်စာသတင်းပို့ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဂျီမေးလ်အကောင့်တွင်သိမ်းထားသောအဆက်အသွယ်များသို့သာပို့ပေးနိုင်သည့်အလားအလာရှိသည် ပုံမှန်ဆက်သွယ်မှုမရှိပါ။ ဒီ option ကို Gmail configuration options နဲ့ General section မှာရရှိနိုင်တယ်။
အီးမေးလ်များကိုလက်မှတ်ထိုးခြင်းကကျွန်ုပ်တို့ကိုမိတ်ဆက်ပေးပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များကိုပေးရုံသာမကကျွန်ုပ်တို့နှင့်အခြားဆက်သွယ်မှုနည်းလမ်းများနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုများကိုလည်းပါ ၀ င်စေသည်။ Gmail, ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြု ကွဲပြားခြားနားသောလက်မှတ်ပေါင်းဖန်တီးပါ, အီးမေးလ်အသစ်တစ်ခုဖန်တီးစဉ်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့လက်ခံရရှိသောအီးမေးလ်များကိုတုံ့ပြန်သောအခါနှစ် ဦး စလုံးအသုံးပြုနိုင်သည့်လက်မှတ်များ။
လက်မှတ်ကိုဖန်တီးသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီ၏လိုဂို (သို့) အထက်ပုံတွင်မြင်ရသောအခြားမည်သည့်ပုံမဆိုထည့်နိုင်သည်။ အရမ်း ကျနော်တို့စာသား format နိုင်ပါတယ် ငါတို့နှစ် ဦး စလုံး font ကိုကြိုက်နှစ်သက်သည်အတိုင်း, ၎င်း၏အရွယ်အစားအတိုင်းမျှတမှု ... ဒီ option ကိုအထွေထွေအပိုင်းအတွင်း, ဂျီအက်စ်အမ် configuration ကိုရွေးချယ်စရာအတွင်းရရှိနိုင်ပါသည်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားမှုရှိသောအီးမေးလ် ၀ န်ဆောင်မှုများကဲ့သို့ပင်ဂျီမေးလ်သည်ကျွန်ုပ်တို့လက်ခံသောအီးမေးလ်များအားလုံးကိုအခြားအီးမေးလ်အကောင့်တစ်ခုသို့သို့မဟုတ်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီသောအီးမေးလ်များကိုသာလျှင်ခွင့်ပြုသည်။ သတ်မှတ်ချက်များကိုသတ်မှတ်ရန် Forwarding ရွေးချယ်မှုအတွင်းတွင် filter တစ်ခု ဖန်တီး၍ တံဆိပ်များတွင်ကဲ့သို့, ကိုတည်ထောင်ရန်လိုသည် အီးမေးလ်များကိုပြန်လည်ပေးပို့ရန်အတွက်လိုက်နာရမည့်စံနှုန်းများ ကျွန်တော်တို့လိုချင်သည့်လိပ်စာသို့
ဂျီမေးလ်ကကျွန်ုပ်တို့အားပေးထားသော ၀ န်ဆောင်မှုအားလုံးအတွက်ဂျီမေးလ်၊ ဂူဂဲလ်၊ ဂူဂဲလ်ဓာတ်ပုံများအတွက် ၁၅ GB အခမဲ့သိုလှောင်မှုပေးထားသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပူးတွဲဖိုင်များပါသောအီးမေးလ်အမြောက်အများကိုလက်ခံရရှိလျှင်၊ ဂျီမေးလ်သည်နေရာအနှံ့အပြားတွင်နေရာယူထားသည့် ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ နေရာလွတ်စေရန်၊ search box တွင် "size: 10mb" (ကိုးကားခြင်းများမရှိပဲ) command ကိုသုံးနိုင်သည်။ သို့မှသာ 10 MB အထိသိမ်းထားသောအီးမေးလ်များကိုပြလိမ့်မည်။ အကယ်၍ "size: 20mb" (မျက်တောင်အဖွင့်အပိတ်မပါရှိပါက) ကိုအစားထိုးမည့်အစား 20mb အထိသိမ်းထားသောအီးမေးလ်များအားလုံးပြလိမ့်မည်။
ပုံမှန်အားဖြင့်ဂူးဂဲလ်ကအီးမေးလ်များတွင်မည်သည့်ပူးတွဲမှုအမျိုးအစားနှင့်မည်သည့်အမျိုးအစားပါဝင်သည်ဆိုသည့်အချက်ကိုပြသသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏အီးမေးလ်အကောင့်ကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်နေ့အချိန်တွင်အီးမေးလ်များစွာကိုလက်ခံရရှိပြီး၎င်းတို့အားလုံး၏ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ကိုမလိုချင်ပါကကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သည် ပြသအကြောင်းအရာများ၏သိပ်သည်းဆကိုပြောင်းလဲပါ။ ဒီရွေးချယ်မှုကို Content Density အပိုင်း၊ cogwheel ထဲမှာရနိုင်တယ်။
Gmail ကကျွန်တော်တို့ကိုရွေးချယ်စရာသုံးခုပေးထားသည်။ ပုံမှန်ပူးတွဲစာအမျိုးအစားများပါသောအီးမေးလ်များကိုပြသသည်။ အဆင်ပြေအီးမေးလ်အားလုံးမှာပူးတွဲဖိုင်တွေမရှိပဲပြသတဲ့နေရာမှာ ကျစ်လစ်သောကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဒီဇိုင်းနှင့်အတူတူဖြစ်သည်။
တစ်ကြိမ်ထက်မကသင်ကဟုတ်ကဲ့သို့မဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဖြေရမည့်အီးမေးလ်တစ်စောင်လက်ခံရရှိသည်မှာသေချာသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်အရေးမကြီးပါ။ ဤအခြေအနေများတွင်၊ ၎င်းကိုမမေ့ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် Postpone option ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဤရွေးချယ်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စာအ ၀ င်ရှိ (Postponed tray တွင်တည်ရှိပြီး) အီးမေးလ်မက်ဆေ့ခ်ျကိုဖျက်ပစ်ပါ ငါတို့တည်ထောင်သောနေ့နှင့်အချိန်၌လည်းထင်ရှားလိမ့်မည်.
ဂျီမေးလ်က SPAM ကိုရှောင်ရှားရန်ကျွန်ုပ်တို့အားအစွမ်းထက်သောစစ်ထုတ်ကိရိယာများပေးထားသည်၊ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတွင်၎င်းသည်အီးမေးလ်အားလုံးကိုမှန်ကန်စွာမဖော်ထုတ်နိုင်ပါ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်တူညီသောအီးမေးလ်လိပ်စာဖြစ်သောဂျီမေးလ်မှအမြဲတမ်းလာသည့်အီးမေးလ်များကိုလက်ခံရန်ငြီးငွေ့ပါက၊ ကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ရိုက်ပိတ်ဆို့ရန်ခွင့်ပြုပါတယ် ငါတို့ပို့လိုက်တဲ့အီးမေးလ်တွေအားလုံးကိုအမှိုက်ထဲမှာတိုက်ရိုက်ပေါ်လာအောင်လုပ်နိုင်တယ်။ အသုံးပြုသူကိုပိတ်ဆို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အီးမေးလ်ကိုဖွင့ ်၍ အီးမေးလိပ်စာအဆုံးတွင်ဒေါင်လိုက်တည်ရှိသောအစက်သုံးခုကိုနှိပ်ပါ။ ပိတ်ရန်ကိုနှိပ်ပါ။
Gmail ကို offline သုံးပါ
သာမာန်အားဖြင့်လက်ပ်တော့ပ်ဖြင့်အလုပ်လုပ်ပါကအချို့သောအချိန်များ၌အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုကိုရှာမတွေ့ပါ။ ဤကိစ္စများတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုမရှိပဲ Gmail ကိုအသုံးပြုနိုင်သည် Google Chrome ကိုသုံးမှသာရနိုင်သည်။ ဤရွေးချယ်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အားနောက်ဆုံးပေါ်အီးမေးလ်များကိုကြည့်ရှုရန်နှင့်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုရှိသည့်အတိုင်းဘရောင်ဇာမှတိုက်ရိုက်တုန့်ပြန်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အင်တာနက်သို့ဆက်သွယ်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့ရေးသားထားသော (သို့) တုန့်ပြန်သောအီးမေးလ်များကိုဆက်လက်ပေးပို့လိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » လဲ tutorial » ဂျီမေးလ်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပြီးလှည့်ကွက်မှအကျိုးများရန်လှည့်ကွက်
Amazon သည် Fire HD 8 အသစ်ကိုအပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းနှင့်တင်ဆက်သည်